अमेरिका यात्रा चेतावनी, तर यो अझै पनी बहामास मा राम्रो छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » बहामास ब्रेकिंग न्यूज » अमेरिका यात्रा चेतावनी, तर यो अझै पनी बहामास मा राम्रो छ
बहामास ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • क्यारिबियन • cruising • सरकारी समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार • Wtn
संयुक्त राज्यले आफ्नो "यात्रा नगर्ने सूची" मा जोड्ने देशहरुको सूची बढ्दो छ। हिजो देखि यो पनि बहामास सामेल छ।
यो अझै पनी राम्रो र बहामा मा सुरक्षित छ जब फ्लोरिडा वा लुइसियाना जस्तै धेरै अमेरिकी राज्यहरु को यात्रा को तुलना मा।
चूंकि यस्तो घरेलु यात्रा सूची मा छैन, र घरेलु तुलना एक अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा चेतावनी को हिस्सा हैन, बहामाजस्ता पर्यटन मा निर्भर विदेशी गन्तव्यहरु अब अमेरिकी प्रणाली बाट बाहिर खटिएका छन्।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम को लागी अमेरिकी केन्द्रहरु (सीडीसी) ले बहामा भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका अमेरिकी छुट्टिहरु को लागी एक स्तर4यात्रा चेतावनी जारी गरेको छ।
यसले डिज्नी क्रूज लाइन अतिथिहरु लाई प्रभावित गर्न सक्छ जो निकट भविष्य मा एक डिज्नी क्रूज जहाज मा द्वीप राष्ट्र को यात्रा गर्ने योजना छ।
जबकि संक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिका मा यसको उच्चतम मा छ, उनीहरु बहामास मा घट्दै छन्, छिमेकी बहामास को बिरुद्ध अमेरिका द्वारा जारी लेभल ४ को चेतावनी लाई प्रश्न उठाउँदै
CDC ले आज आफ्नो स्तर6यात्रा चेतावनी सूची मा4देशहरु लाई जोडेको छ।
अमेरिका यात्रा नगर्ने सूचीमा थपिएका six देशहरु यस प्रकार छन्:
के यो साँच्चै बहामास भ्रमण राम्रो छ?
यो बहामास मा राम्रो छ। यो सुन्दर सेतो बालुवा समुद्र तटहरु, नीलो पानी, र नीलो आकाश को लागी परिचित यो देश को लागी नारा थियो। क्रूज ब्यापारs यो क्यारिबियन देश मा पर्यटन पोर्टफोलियो को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
यो वास्तव मा अझै बहामास मा अझ राम्रो छ!
तर अमेरिकी सरकारले आज फ्लोरिडा वा हवाईको तुलनामा बहामास भ्रमण गर्न कती सुरक्षित छ भन्ने कुरा छोडेको छ। यसको सट्टा, अमेरिकी सरकारले फ्लोरिडा कोस्ट बाट १०० माईल टाढा आफ्नो छिमेकी को बिरुद्ध यात्रा नगर्ने स्तर ४ को चेतावनी जारी गर्यो।
बहामा अर्थव्यवस्था यात्रा र पर्यटन उद्योग मा निर्भर गर्दछ। अमेरिकाले एलevel4यात्रा चेतावनी एक प्रमुख निराशा र द्वीप राष्ट्र र 368,000 बहामा नागरिकहरु को लागी खतरा हो। ती मध्ये धेरै काम र यात्रा र पर्यटन उद्योग को भलाई मा निर्भर गर्दछ, र अमेरिकनहरु आफ्नो आगन्तुकहरु को विशाल बहुमत छन्।
बहामास बिरुद्ध अमेरिकी यात्रा चेतावनी पढ्छ:
कारण बहामास को यात्रा नगर्नुहोस् Covid-19। बहामास को केहि क्षेत्रहरु मा सावधानी को कारण अपराध। सम्पूर्ण यात्रा सल्लाहकार पढ्नुहोस्।
राज्यको विभाग पढ्नुहोस् COVID-19 पृष्ठ तपाइँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा को योजना अघि।
संयुक्त राज्य अमेरिका रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु (सीडीसी) जारी गरेको छ बहामा को लागी स्तर ४ यात्रा स्वास्थ्य सूचना कोभिड १ to को कारणले देश मा कोभिड १ of को एक धेरै उच्च स्तर को संकेत गर्दछ। कोभिड -१ ing को संक्रामक हुने र गम्भीर लक्षणहरुको विकास हुने जोखिम कम हुन सक्छ यदि तपाइँ एक संग पूर्ण रुपमा खोप लगाउनुभएको छ एफडीए अधिकृत खोप। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा को योजना बनाउनु भन्दा पहिले, को लागी सीडीसी को विशिष्ट सिफारिशहरु को समीक्षा गर्नुहोस् खोप र खोप नलागेको यात्रीहरु। दूतावासको भ्रमण गर्नुहोस् COVID-19 पृष्ठ बहामास मा COVID-19 मा अधिक जानकारी को लागी।
बहामा अर्थव्यवस्था पर्यटन मा निर्भर गर्दछ, अमेरिकी टूरि माsts
विडम्बना संयुक्त राज्य अमेरिका नयाँ संक्रमण र मृत्यु संग विश्व मा सबै रेकर्ड तोड्दै छ, जबकि बहामास संख्या एक गिरावट मा छ। बहामास मा संक्रमण संख्या र मृत्यु को आँकडा फ्लोरिडा वा हवाई राज्य मा संख्या भन्दा तल रहेको थियो जब जनसंख्या को अनुपात मा देखियो।
विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका र सानो बहामा को बीच मुख्य अंतर खोप हो।
जबकि ३३% अमेरिकीहरु भन्छन् कि उनीहरु कहिल्यै खोप लगाउँदैनन्, र बाकी को अधिकांश खोप लगाइएको छ, जबकि अमेरिका मा खोप सजिलै संग उपलब्ध छ, सानो बहामास लाई यसको सम्पूर्ण जनसंख्या लाई प्रशासित गर्न को लागी पर्याप्त खोप छैन। जनसंख्या को 15.3% मात्र खोप लगाइएको छ।
टीका लगाएका आगन्तुकहरुलाई स्वागत बहामास यात्रा र पर्यटन उद्योग को स्वास्थ्य को लागी आवश्यक छ
बहामासले पछिल्लो १० दिनमा प्रति १०,००० मानिसहरुमा १०३ संक्रमणको रिपोर्ट गरेको छ।
यस्तो संख्या शिखर को ३%% को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर संक्रमण को ५%% रिपोर्ट।
यो बुझ्न योग्य छ कि अमेरिकी विदेश विभाग अमेरिकियों लाई विदेश मा खतरा को चेतावनी दिन बाध्य छ। जे होस्, यदि संख्याको आधारमा बहामास मा एक खोपिएको अमेरिकी को लागी बस्ने स्पष्ट रूप मा धेरै जसो मा घर मा बस्नु भन्दा सुरक्षित छ, किन विदेश विभाग यस तथ्य लाई आफ्नो विदेश यात्रा सल्लाह मा समावेश नगर्न चाहान्छ?
Lपर्यटन मा विश्वव्यापी समन्वय को ack
यो अर्को उदाहरण हो जहाँ पर्यटन मा वैश्विक नेतृत्व को कमी, वा वैश्विक नेतृत्व को कुनै पर्यटन प्रतिनिधित्व छैन।
जुर्गेन स्टेनमेट्ज, अध्यक्ष विश्व पर्यटन नेटवरk भन्छन्: "विश्वव्यापी यात्रा र पर्यटन उद्योग मा समन्वय र नेतृत्व को कमी अर्थव्यवस्था र स्वास्थ्य को लागी सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।"
बहामास सबै को लागी रमाईलो को लागी एक सुरक्षित र सफा गन्तव्य हो।
Tउहाँ बहामास पर्यटन बोर्डले आफ्नो यात्रा स्वास्थ्य पृष्ठ अपडेट गर्नुभयो
बहामामा प्रवेश गर्ने वा बस्ने सबैको स्वास्थ्य र भलाई पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ, र कोभिड -१ of को फैलावट कम गर्न मेहनती प्रयासहरु लागू हुन्छन्। बहामास सबै रमाईलो को लागी एक सुरक्षित र स्वच्छ गन्तव्य हो सुनिश्चित गर्न को लागी निम्न यात्रा र प्रविष्टि प्रोटोकल राखिएको छ।